Umzi-mveliso wePhcoker oBuchwephesha waMayeza aPhakathi kunye neeAPIs
Ishishini eligxila kumachiza aphakathi asebenzayo amayeza (API)
ISO9001: Imigaqo ye-2000 kunye nokuthotyelwa kwamanqanaba e-cGMP.
Ngaphezulu kwe-20 iminyaka yamayeza oshishino lwezobisi kunye nenkxaso ehambelana nezobuchwepheshe.
Ngokuphumelele kwezesayensi kunye nezobuchwepheshe, ukuveliswa kwe-Shangke kusebenza kakuhle kwaye ku-eco-friendly.
Iqela lethu lenkonzo yamakhasimende linika inkxaso epheleleyo yobugcisa kunye nezesayensi kwizinga eliphezulu kubaxumi ngexesha elifanelekileyo.
Iimveliso zethu zeCore
Isishwankathelo sePalmitoylethanolamide (PEA) Kukho ingxelo yokuba uLawulo lokutya kunye neDrug luvumile ukungenisa isicelo f ...
Ngaba ufile ngenxa yokuguga? Ewe, ichiza elichasene nokwaluphala ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndlela inokuthenjwa yokubuyisa indawo yakho yebhayiloji ...
Kutheni sifuna iMagnesium? Ngaphambi kokuba singene kwiMagnesium L-Threonate nootropic supplement, unokufuna ukuqonda abo ...
Isongezelelo seGalantamine Hydrobromide Supplement: Ngaba sisiyobisi esihle seAlzheimer's?
Isishwankathelo seGalantamine Hydrobromide isishwankathelo seGalantamine hydrobromide sisiyobisi esisetyenziselwa ukunyanga isifo sengqondo esixhalabisayo se-Alzheimer's ...
I-Nootropics PRL-8-53: Ngaba iyayiphucula Ngokwenene inkumbulo kunye nokuFunda kokuKwazi?
Oktobha 20, 2020
I-PRL-8-53 isishwankathelo I-hype ye-PRL-8-53 njengesiyobisi esisebenza ngengqondo emva phaya kwii-1970s zakuqala. UNikolaus Hansl, unjingalwazi e-C ...
ICycloastragenol Isishwankathelo seCycloastragenol (CAG) ekwabizwa ngokuba yi-T-65 yinto yendalo ye-tetracyclic triterpenoid efunyenwe kwi-Astr ...
Nicotinamide riboside (NR) kunye nicotinamide riboside (Chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride luhlobo chlorinated n ...
Yintoni iOxiracetam? I-Oxiracetam yenye yezongezo ezindala ze-nootropic ezivela kusapho lwe-racetam. Yayiyi-racetam yesithathu com ...
Yintoni i-9-ME-BC? I-9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) ekwabizwa ngokuba yi-9-MBC yindawo yenoveli ye-nootropic evela kwiqela le-β-carboline. ...
Iilebhu zeR & D
Bhalisa ukuze uthole ulwazi olutsha malunga neNkampani yethu.